Chinhoyi University of Technology Inonzi Yave Kumanikidza Vadzidzisi, Vadzidzi neVashandi Kubayiwa Nhomba yeCovid-19
Chikoro chikuru cheChinhoyi University of Technology -CUT- chiri kurambidza vadzidzi nevashandi vanenge vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere che COVID-19 kupinda pachikoro.
Vadzidzi avo vanga vauya kuzopedza zvidzidzo zvavo pamwe nekunyora bvunzo nemusi weMuvhuro vakashamisika vachinzi vaburitse kadhi rinoratidza kuti vakabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere che COVID-19 kuti vabvumirwe kupinda pachikoro.
Mumwe mudzidzi asina kuda kudomwa nezita anoti arambidzwa kupinda pachikoro achinzi haana kubayiwa nhomba audza Studio 7 kuti anoti chanyanya kumurwadza ndechekuti havana kunge vayambirwa nezvedanho iri.
Munyori anoona nezvemagariro evadzidzi musangano rinomirira vadzidzi pachikoro ichi VaFrancis Nhete vanoti danho ratorwa nechikoro rakanaka sezvo vachiwirirana naro sevatungamiri vevadzidzi.
Mutauriri weCUT Dr Tapera Musekiwa vanoti vatora danho iri senzira yekudzivirira vamwe vadzidzi nevashandi.
VaTapera vanoti vabva vaisa nhomba pakiriniki yechikoro kuti zvive nyore kune vanenge vasarudza kubayiwa.Zvikoro zvakawanda zvepamusoro zvakatozivisa kuti vadzidzi vanenge vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere che COVID-19 havabvumirwe kudzidza kana kunyora bvunzo nevamwe.
Asi danho iri riri kupikisawa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti kuita izvi kutyora kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remitemo. Gore rapera muna Mbudzi, chikoro cheCUT chakambovharwa mushure mekunge vadzidzi makumi mashanu nevanomwe vabatwa nechirwere cheCovid-19.